Weghachi iTunes na-amata iPhone? Lee ihe kpatara ya & Ihe dị adị! - Iphone
weghachi akara ngosi na iphone
otu esi eme oku wifi na iphone 6
Igwe okwu iphone na igwe okwu anaghị arụ ọrụ
Weghachi iTunes na-amata iPhone? Nke a bụ ihe kpatara & Ezigbo Mmezi!
Ged tinyere iPhone gị na kọmputa gị, mana ọ nweghị ihe na-eme! Maka ihe kpatara ya, iTunes agaghị amata iPhone gị. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ihe kpatara iTunes anaghị amata iPhone gị ma gosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ maka ezi !
Gini mere iTunes adighi amata iPhone m?
iTunes anaghị amata iPhone gị n'ihi esemokwu na eriri Lightning gị, ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị, ọdụ ụgbọ USB USB gị, ma ọ bụ ngwanrọ nke iPhone ma ọ bụ kọmputa gị. Nzọụkwụ dị n'okpuru ga-egosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ mgbe iTunes agaghị amata iPhone gị!
Lelee USB Lightning gị
O kwere omume iTunes anaghị amata iPhone gị n'ihi na enwere nsogbu na eriri Lightning gị. Ọ bụrụ na eriri ọkụ Lightning gị mebiri emebi, ọ gaghị enwe ike ijikọ iPhone gị na kọmputa gị.
Nyochaa ngwa ngwa Lightning gị ngwa ngwa wee lelee mmebi ma ọ bụ mmebi ọ bụla. Ọ bụrụ n’echiche na enwere nsogbu na eriri Lightning gị, gbalịa iji nke enyi. Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere ọtụtụ ọdụ ụgbọ USB, gbalịa iji nke dị iche.
Eriri gị nke MFi abụrụ?
MFi asambodo bụ nnoo Apple si “akara nke ihu ọma” maka iPhone Gịnị. MIF-gbaara àmụmà Gịnị bụ ndị na-adịghị ize ndụ iji na gị iPhone.
N'ikwu okwu n'ozuzu, eriri ndị dị ọnụ ala ị ga-ahụ na ụlọ ahịa dollar obodo gị ma ọ bụ ebe a na-ere mmanụ abụghị ndị MFi kwadoro ma nwee ike imebi iPhone gị dị oke njọ. Ha nwere ike overheat na imebi esịtidem mmiri gị iPhone.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu eriri USB nke MFi kwadoro, lelee ndị nke dị na ya Payette Forward nke Amazon Storefront !
iphone 7 agaghị akwụ ụgwọ
Nyochaa ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị
Na-esote, lelee n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị -ọ bụrụ na ikpuchi ya na mpekere, ọ nwere ike ọ gaghị enwe ike ijikọ njikọta n'ọdụ ụgbọ mmiri na eriri Lightning gị.
Jidere ọkụ ọkụ ma nyochaa nke ọma n'ọdụ ụgbọ mmiri Lightning. Ọ bụrụ na ị hụ lint, egbe, ma ọ bụ mpempe ndị ọzọ n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning, jiri ya hichaa ya mgbochi static ahịhịa ma ọ bụ ihe ọhụrụ, ezé ezé ezé.
bọtịnụ ụlọ anaghị arụ ọrụ na iphone 6
Nwelite na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke iTunes
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ kọmputa na-arụ ọrụ ochie nke iTunes, ọ nwere ike ọ gaghị amata iPhone gị. Ka anyị lelee iji hụ ma ọ bụrụ na nwelite iTunes dị!
Ọ bụrụ na ị nwere Mac, mepee App Store wee pịa ya Mmelite taabụ na ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na nwelite iTunes dị, pịa Mmelite n'aka nri ya. Ọ bụrụ na iTunes gị dị ọhụrụ, ị gaghị ahụ bọtịnụ Mmelite.
Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa Windows, mepee iTunes wee pịa taabụ Enyemaka na elu ihuenyo ahụ. Wee, pịa Lelee maka mmelite . Ọ bụrụ na mmelite dị, na-agbaso ihuenyo ihuenyo iji melite iTunes!
Malitegharịa ekwentị gị na iPhone
O kwere omume obere ngwanrọ glitch na-egbochi iPhone gị ka iTunes mata ya. Anyị nwere ike ịgbalị idozi nsogbu a nwere ike ịmalitegharịa ekwentị gị. Wayzọ ị gbanyụrụ iPhone si dabere na nke ị nwere:
iPhone X : Pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ya na nke bọtịnụ olu ruo mgbe ihe mmịfe ahụ pụtara. Swipe ike ngosi aka ekpe n'aka ekpe ka mechie iPhone gi. Mgbe sekọnd ole na ole, pịa ma jide naanị n'akụkụ bọtịnụ ruo mgbe Apple logo mgbukepụ n'elu na ihuenyo.
Ekwentị ndị ọzọ niile : Pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe slide ka ike gbanyụọ na-egosi. Swipe akara ọcha na acha uhie uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị. Chere a ole na ole sekọnd, wee pịa ma jide ike button ruo mgbe ị na-ahụ Apple logo na ihuenyo.
Mgbe ị nọ ya, gbalịa ịmaliteghachi kọmputa gị. Ọ dịkwa mfe ngwanrọ ngwanrọ, nke nwere ike igbochi iTunes ịchọpụta iPhone gị.
Gbaa mbọ hụ na ị pịa “Tụkwasị Kọmputa a”
Site n’oge ruo n’oge, ị ga-ahụ mmapụta nke na-ajụ ma ịchọrọ ka iPhone gị “tụkwasị obi” kọmputa gị. Mmapụta a na-egosi oge mbụ ijikọ iPhone gị na kọmputa ọhụrụ. Site na ịtụkwasị kọmputa gị obi, ị na-enye iPhone gị ike ijikọ na iTunes.
Enwere ohere iTunes agaghị amata iPhone gị n'ihi na ọ tụkwasịghị kọmputa gị obi. Ọ bụrụ n’ịhụ “Tụkwasị Kọmputa a?” mmapụta, pịa mgbe niile Tụkwasị obi ọ bụrụ na ọ bụ kọmputa nke gị!
nchekwa sistemụ iphone dị oke elu
Agara M N’amaghị Aka “Atụkwasịla Obi”!
Ọ bụrụ na ị na-atụfu ihe ọghọm 'atụkwasịla obi' mgbe mmelite ahụ pụtara, gaa Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia -> Tọgharia ebe & Nzuzo .
Nke ọzọ, oge ijikọ iPhone gị na kọmputa gị, ị ga - ahụ “Tụkwasa Kọmputa a?” mmapụta ọzọ. Oge a, jide n'aka na ịpị Tụkwasị obi !
Melite komputa komputa gi
Kọmputa na-arụ ụdị ochie nke ngwanrọ nwere ike oge ụfọdụ banye na obere glitches na chinchi. Imelite na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke ngwanrọ kọmputa gị bụ ụzọ dị ngwa iji gbalịa ma dozie nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere Mac, pịa akara ngosi Apple na akaekpe aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Wee, pịa Banyere Nke a Mac -> Software Update . Ọ bụrụ na mmelite dị, pịa Mmelite . Ọ bụrụ na ọ bụghị melite dị, gaa na nzọụkwụ ọzọ!
ihe ị ga -eme mgbe ipad agaghị agbanye
Ọ bụrụ na ịnweghị Mac, lelee isiokwu anyị na-elekwasị anya karịa na PC fixes . Nzọụkwụ dị ka ịtinye Apple Mobile Device USB Driver nwere ike mgbe ụfọdụ idozi nsogbu ahụ mgbe iTunes anaghị amata iPhone gị.
Lelee Ozi Sistemụ Mac Gị Ma ọ bụ Sistemụ Usoro
Ọ bụrụ na iTunes ka agaghị amata iPhone gị, enwere usoro nchọpụta nsogbu ngwanrọ ikpeazụ anyị nwere ike ịme. Anyị ga-elele ozi sistemụ iPhone gị ma ọ bụ sistemụ akụkọ iji hụ iPhone gị gosipụtara n'okpuru osisi ngwaọrụ USB.
Mbụ, jide igodo nhọrọ ma pịa akara ngosi Apple na elu akaekpe nke ihuenyo wee pịa Ozi Sistemụ ma ọ bụ Akụkọ System . Ọ bụrụ na Mac na-ekwu Ozi sistemụ, pịa Report Report mgbe mmapụta pụtara.
Ugbu a ị nọ na ihuenyo Report System, pịa nhọrọ USB n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na iPhone apụtaghị na menu a, enwere ike nsogbu ngwaike na-egbochi iTunes ịmara iPhone gị. O nwere ike ịbụ nsogbu na eriri Lightning gị, ọdụ ụgbọ USB, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na iPhone gị. Aga m ekpuchi nke a n'ụzọ zuru ezu na nzọụkwụ ọzọ!
Ọ bụrụ na iPhone gị pụtara na menu a, enwere ngwanrọ nke atọ na-egbochi iPhone ka ọ bụrụ onye iTunes ghọtara. Ọtụtụ oge, sọftụwia nke atọ bụ ụdị mmemme nchekwa. Lelee ntuziaka Apple na idozi nsogbu dị n'etiti mmemme mmemme ndị ọzọ na iTunes maka enyemaka ọzọ.
otu esi edozi ihuenyo ipad gbawara agbawa
Ọ bụrụ na iTunes ka ga-amataghị iPhone gị, oge eruola ka ị chee maka nhọrọ ndozi. Ka ọ dị ugbu a, enwere m olileanya na m enyerela gị aka ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ eriri Lightning gị, ị ga-enweta nke ọhụrụ ma ọ bụ gbazinye otu enyi. Nwere ike nweta a nnọchi USB si Apple Store ma ọ bụrụ na gị iPhone kpuchie AppleCare +.
Ọ bụrụ na ọ bụ ọdụ ụgbọ USB, ịnwere ike ịmezi kọmputa gị ma ọ bụrụ na ọnweghị nke ọdụ ụgbọ USB na-arụ ọrụ. O nwekwara ike ịbụ na njedebe USB nke USB Lightning gị iPhone bụ nsogbu ahụ, yabụ gbaa mbọ jikọọ ọtụtụ ngwaọrụ na kọmputa gị site na ọdụ ụgbọ USB.
Ọ bụrụ na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị na-akpata nsogbu ahụ, ị ​​nwere ike mezie ya. Ọ bụrụ na AppleCare + kpuchie iPhone gị, mee ndokwa na Genius Bar na isi n'ime obodo gị Apple Store.
Ọ bụrụ na AppleCare + ekpuchighị iPhone gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ idozi ya ozugbo, anyị na-akwado Pulse . Puls bụ ụlọ ọrụ na-achọ nrụzi nke ga-ezitere gị onye ọrụ aka ama. Ha ga-edozi iPhone gị na-ebe na mmezi ga-kpuchie site a ndụ akwụkwọ ikike!
Amaara M Ugbu A!
iTunes na-amata gị iPhone ọzọ na ị nwere ike akpatre mmekọrịta ha. Oge ọzọ iTunes anaghị amata iPhone gị, ị ga-ama otu esi edozi nsogbu ahụ! Hapụ ikwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị.
Daalụ maka ịgụ,
Enwere ike inyeghachi onye na -ere ụgbọ ala ego?
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ BAỊBỤL NA NKE MMỤỌ NỌBA 6
Kedụ ka m ga esi eji ehi ụra na App Clock My iPhone? Ihe Nduzi.
Olee Otú M Pịnye Na otutu Asụsụ Na iPhone? Idozi Autocorrect!
Anya abụọ nwere agba dị iche pụtara ihe ime mmụọ
Kedu ihe Nọmba 5 Pụtara n'ụzọ ime mmụọ? Nọmba mmụọ ozi
Gịnị Mere My iPhone Eme A Static Noise? Nke a bụ Ndozi ahụ!
Olee otú Iji Melite Gị iPhone Iji Finder
My iPhone ihuenyo na-Blinking! Nke a bụ The Real Idozi.
My iPhone agaghị agbanyụ! Ebe ị ga-ahụ ihe ngwọta dị irè!
Gịnị Bụ ingkpọ Video? Otu esi eme oku vidiyo na iPhone, gam akporo, & More!
New iPhone Headphone Jack: Designdị Ha Na-ahụbeghị!
Pụtara Nku n'ime Bible - Ịhụnanya na Nchebe
Gbanyụọ nnyefe ozi ime obodo na Postfix na iRedMail
iCloud Nchekwa Full? Adịla akwụ ụgwọ maka iCloud ndabere ọzọ.
Otu esi azụta ụgbọ ala na -akwụghị ụgwọ
My iPhone n'ụlọ button na-adịghị arụ ọrụ! Nke a bụ azịza kasịnụ.
NZIZI NKE osisi osisi nke ndụ
Enweghi ike iwunye ngwa na iPhone X? Ugboro abụọ Pịa Iji Wụnye? Idozi!
Iwu chọrọ ịzụta ụlọ na California